သံတွဲမြို့တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးမုန်းတီးမှုဖြစ်စေရန်လှုံဆော်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(၄)ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » သံတွဲမြို့တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးမုန်းတီးမှုဖြစ်စေရန်လှုံဆော်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(၄)ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါသည်
- than shwe mg
Posted by than shwe mg on Jul 14, 2012 in Contributor, Columnist, Creative Writing, Myanmar Gazette, News | 44 comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(၄)ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါသည်။၁၃ ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလှုံဆော်သူ
၀ံသာနုရက္ခိတအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး RNDP ၏ ညွန်ကြားချက်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ လှုံဆော်သူ (၄) ဦးမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များမှာ
စာများဖြန့်ဝေပြီးသွေးထိုးလှံဆော်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ရေတပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့
မောင်းနှင်လာသော လိုင်စင်မဲ့ Supersloon ဖင်ကောက်နံပတ်တု၁ဂ/ ၄၁၃၉ နှင့်အတူ
စာရွက်များအားဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကားပေါ်တွင်လူ(၄)ဥိးပါရှိပြီး ကားပိုင်ရှင်မှာ
ငကျော်တောင်ကွင်းထဲနေ ဦသိန်းညွန့်၏သား ၊ ဗောဓိကုန်းဘုန်ကြီးကျောင်းသား
တစ်ဦး၊၊မောင်မောင်ခင်ဝပ်ရှောမှတစ်ဦးနှင့်နောက် ၁ ဦးတို့ဖြစ်ပါသည်။ နောက်နာ
အမှုကိုလည်း ပုဒ်မ ၁၄၄ သာတပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
လည်း ကန်ဆေးခပ်သလို့လုပ်ပြီးနောင်ဖမ်းဆီးမိသောအခါ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် လူငယ်(၂)
ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။ RNDP နှင့်ဝံသာနုရက္ခိတရအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တို့ က
ရွာများကိုမီးရှိယောင်ပြု မွတ်ဆလင်ကျေးရွာများသို့ပြေးဟန်ပြ အစရှိသဖြင့်နှစ်ဖက်
ရန်၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုနှင်ထုတ်ရန်နှင့် ၄င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယုရန်၊ရခိုင်
တပ်ထူထောင်ရန်နှင်အလှူရှင် များ၏အလှူငွေများကို အပိုင်စီးရန်ကြိုပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
About than shwe mg
than shwe mg has written4post in this Website..
View all posts by than shwe mg →
ယုံယုံ ယုံဘူးဆိုပတ် ဘူးဆိုပတ်
ဒီသတင်း သေချာလား၊ အမှန်လား????????????????????????????????
လုပ်ကြံ လန်ကျုတ် ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်
အဲဒီဖက်မှာ ခြေပုန်းခုတ်ကလီးတွေ များနေတယ်
ချောက်ကျင့် နဲနဲမှ မကောင်းတဲ့ xx တွေ ။
မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါ၏။သို့ သော် —–ပြဿနာကိုခေါင်းအေးအေးဖြင့်
ခြုံငုံ သုံးသပ်ပြီးမှသာ တင်သင့်တာပါ။မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒီကလေး
တွေဟာ လူငယ်တွေ၊အသက်(၂၀)အရွယ်လေးတွေပါ။တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်
acG;rom; ukvm;awG တသက်လုံးလိမ်နေတာဘဲ…
ဖတ်ရတာ .. တမျိုးပဲ..သတင်းလိုလို အတင်းလိုလို
Supersloon ဖင်ကောက် ဆိုတဲ့ကားမျိုးကို တခါမှမကြားဖူးသေးဘူးဗျ။
အခြားသတိပြုမိတာတခုကတော့… ဒီရွာထဲမှာ ဘာတွေမျန်းမသိ ၀င်အော်..၀င်ရေးတတ်ကြတဲ့ သံတွဲသားတွေကို
တွေနေရတော့… ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဒေသကအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကတရားခံတွေဟာ
သံတွဲမြို့ ကိုများခြေကုတ်ယူထား ကြသလားပဲနော်..
ရေးလိုက်ရင်လဲ..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုပြီးထဲ့ထဲ့ရေးနေတာတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ
တခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရဲ့စိတ်ဓါတ်က အရမ်းသည်းခံတတ်ကြပါတယ်..
အောင် လ says:
မင်းအမေလင်တွေက ပြဿနာဖြစ်အောင် စာတွေလိုက်ဝေနေတာဘာ။မင်းလဲ ချီးစားတဲ့ဥဏှောက်နဲ့ ကောင်ပါလားဝေး။စာတွေ ဝေတာ နင်လဲ
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်နဲ့ .. တယူသန်အစွဲတွေဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်/ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုပြီး (မလိုအပ်ပဲ)ထည့်ရေးတာက
Pyae Zaw Phyo
လှုံ့ဆော်စာ များဖြန့်စေသူများအားထိုစာဆောင်များနှင်အတူ ဖမ်းဆီးခဲ့ ကြောင်း
ခဲပြာရောင်ဗင်ကားပေါ်မှ စာဆောင်များပေးဝေသွားသော သူများ ယဉ်အမှတ် ၁ဂ/၄၁၃၉ ကားမှဖြစ်ကြောင်း။ ကားမှာလိုက်စင်မဲ့ ကားဖြစ်ပီး ကားပွဲ့ စားတစ်ဦး ထံမှာ အငှားမောင်းနေပီး ကားပိုင်၇ှင်မှာ ကုလားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း။ 6.30သဗြုချိုင် ကျေးရွာ တွင် ဖြန့်ဝေခဲ့ ပါတယ်။ သဗြုချိုင် ကျေးရွာ ဆိုင်ခန်းရောင်းသူ မသင်းသင်းခိုင်မြတ် ထံမှာစာစောင်တစ်၇ွက်အားသိမ်းဆည်ရရှိပါတယ်။ထိူနောက် ဒုရဲ့ အုပ်စိန်မင်းသန်း နှင့်အတူတပ်ကြပ်ကြီး နိင်ဝင်းဦးတို့အဖွဲ့ သည်ထိုကားနောက်သိူလိုက်ခဲ့ ရာ ည 12.00တွင် ပဒဲ ကောကျေးရွာ ဦးသန်းထွေး (ဘ)ဦးဘစံတိုအိမ်ရှေ့တွင် စာဆောင်(၁၃)ဆောင်နင့်အတူဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်။
(က)ညီမင်းခန့် (ဘ)ဦးသိန်းညွန့် ရခိုင် ၁၁/သတန(နိုင်)၀၇၃၁၀၀ (ပ)နှစ် မြန်မာစာ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ဇီဇ၀ါလမ်း သံတွဲ့ မြို့ 
(ခ) ခိုင်ဇော်ဆန်း (ခ)ဖိုးသား (ဘ) ဦးခင်ဇော် 18 နှစ် 10 တန်း အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် ရဲ့ စခန်းဝန်းသံတွဲ
(ဂ) သန့်ဇင်ဖြိုး (ဘ) ဦးသန်းလွင် ၇ခိုင် ၁၁/ဂမန(နိုင်)၀၄၁၄၁၈ ဒုတိယနှစ် မြို့ပြ (စက်မူလက်မူ သိပံသံတွဲ ) ဂွမြို့
(ဃ) နိုင်ရဲ့ ဦး(ခ)ညီညီ (ဘ) ဦးအောင်ထွန်းကြည် 21 နှစ် သမိုင်း (ပ)နှစ် စစ်တွေ ၁၁/သတန(နိုင်) ၀၈၅၀၄၄
than shwe mg says:
ကားပိုင်ရှင်က(က)ညီမင်းခန့် (ဘ)ဦးသိန်းညွန့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၁၁/သတန(နိုင်)၀၇၃၁၀၀ (ပ)နှစ် မြန်မာစာ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ဇီဇ၀ါလမ်း သံတွဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ကုလားမဟုတ်ပါဘူး၊
ဦးသိန်းညွန်အိမ်မှာကား(၃)စီးတောင်ရှိတာပါ။ အောင်လလဲသေချာမှ ကူးတင်ပါ။
Pyae Zaw Phyo က၀ါဒဖြန်ပြီးFacebook မှာရေးထားတာပါ၊
ပြဿနာဆိုတာဖြစ်ရင် လူတွေအမြောက်အများဒုက္ခရောက်တယ် ဘယ်လူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘာသာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကပ်ဘေးတခုဆိုက်ရောက်လာရင် အတူတူခံစားကြရတာဘဲ အေးအတူပူအမျှအတူတကွနေထိုင်ကြဘို့သင့်ပါတယ် တဦးကိုတဦး ဘာသာတခုကနေတခုကို လူမျိုးတမျိုးကနေတမျိုးကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဟာ လူမျိုးရေးဘာသာရေးရဲ့တရားစစ်တရားမှန်တွေမဟုတ်ဘူး http://www.facebook.com/groups/thantwe.budda.service မှာ အထက်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖတ်ရတဲ့ခါစိုးရိမ်စိတ်တခုဝင်လာတယ် အရင်တုန်းကသံတွဲမြို့မှာ နာရေးသာရေးအတူတကွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဆောင်ရွက်ကြတယ် စေတီပုထိုးတွေ ဗလီတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတယ် တယောက်နဲ့တယောက် ဘာသာရေးစော်ကားတာတို့လူမျိုးရေးစော်ကားတာတို့မရှိကြဘူးအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အခုဒီအစဉ်အလာကို ဖျက်ချင်သူတွေပေါ်လာပြီလား အမုန်းမီးတွေ ငြိမ်းအေးပါစေ လူအပေါင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပါစေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းဝေးကြပါစေ သောကခပ်သိမ်းကင်းဝေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးကြပါစေ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ပါ၏ သတ္တ၀ါအပေါင်း ဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
နတ် ကလေး says:
ဖိုး ကြက်တောင်လို လူတွေ အများ ကြီး ရှိဖို့လို ပါတယ် မလိုတစ်မျိုး လိုတစ် မျိုး လူတွေ များနေတယ် ခုဟာက ဖမ်း မိ လို့ပေါ်တာ မဖမ်း ဘဲ ဖြန့်နေ ပျံ့ နေ တဲ့ စာ တွေ ဗီ ဒီယို တွေ က အများ သားပဲ တချို့ ဆို ညမထွက် ရတာကိုတောင် ညဘက် အိမ် ခေါင် မိုး ဂဲ ကျ တယ်လို့ပြောတဲ့ သူရှိသေး အတော် ဆိုး တဲ့ လူမိုက်တွေ ပျက် စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လိုလားသူတွေ ပါ
အေးဗျာ ၊ဘာသာတွေထဲ့ရေးရတာတော့မကောင်းပါဘူး ၊ဒါပေမယ် ပေါ်လဆီနဲ့တိုက်နေလို့၊
တဆိပ်ရှိ ဘာသာခြားဘာညာထိုးချနေလို့သာ ရှင်းအောင်ရေးရတာပါ၊ဒါတောင်facebook မှာ
Pyae Zaw Phyo လိမ်ရေးနေသေးတယ်၊သံတွဲမှာသမိုင်းစဉ်ဆက်လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးပြဿနာ
တခြားနယ်က ကျော့ပိုက်ဘာညာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့အလုပ်ကြမ်းသမားတွေကိုဘဲသတိထားရမှာပါ။
အေးချမ်းစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုအကြံနဲ့ ဘာသာရေးပြသာနာတွေဖြစ်အောင်
ရေးနေ/ပြောနေပါစေ..ကိုယ်တိုင်က အဲ့လိုမရေးမိ/မပြောမိဖို့ ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..
အရေးအကြီးဆုံးက..လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ လူပီသတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ နေထိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ပါ.. ဘာသာတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေ စိတ်ဓါတ်ကောင်းတဲ့လူကို
ကျနော်လေးစားတတ်ပါတယ်..ကျနော့်လိုပဲ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကလည်းဘာသာခြား
တွေကို လူလူချင်းဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ခဲ့ကြလို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထဲမှာ အခြားဘာသာတွေစည်ပင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲဘာသာခြားတွေအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားက ကမ္ဘာအဆင့်မှီတယ်လို့ မပြောလိုပေမယ့်
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့မှုစလင်နိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားအများစုနေတဲ့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အခြားဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိနေတာ ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
စောင့် ကြည့်သူ says:
အပျင်းပြေသဘောမျိုး ဖတ်ကြည့် အကောင်းဆုံး
စာရေးတင်သူလဲ အစွန်းရောက်အဖွဲ့ထဲကဆိုတာ သိသာတယ်
ဖွတဲ့သူက ဖွ ၊ ဖေါတဲ့သူကဖေါ နဲ့ ပုပ်ပွအောင်လုပ်နေတာထင်တယ်
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကလီး တွေ အများစုနေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပေသကိုး ။
သံတွဲမှကလီမရှိဘူး ။မင်း အမေလင်တွေဘဲ နေကြတာပါ၊ commmentကို လေးလေးစားစားပြောကြပါ ၊အဆင့်အတန်းမရှိရင် ၀င်မပြောကြပါနဲ့။
Oo Oo အူးအူးလားဖူးဖူးလား ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ
တာ့ မဟုတ်ဘူး ၊နိုင်ငံတကာမှာဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု အဆင့် No (5)ရှိနေတယ်
same kyaw မယုံရင် ရဲစခန်းအချုပ်ထဲကိုသွားနေပါ။အဲဒီမှာ ဟိုကောင်တွေပျင်းနေတယ်
What is this kalar posting on MG??? Is thatanew style of another make up story made by kalars??? You can post whatever you want but our Govt has clearly mentioned that we’ll not accept you kalars. Stop bullshitting….
ရန်ပြုတတ်သော သူတို့၏အလယ်၌ ရန်မပြုဘဲ ချမ်းသာစွာ ငါတို့နေကုန်၏…..၊
အမုန်းများ၍ ရန်ပွားတတ်သော သူတို့၏ အလယ်၌ မေတ္တာရှေ့ ထား ရန်မပွားဘဲ
acG; ukvm; များအဲသလောက် နားလည်နေရင် အဲသလို ဖြစ်မလာဘူး ..
ukvm;များအား လူစကားဖြင့်ပြော၍ နားမလည်နိုင်ပါ ..
ကျွန်တော်တို့လဲ acG; လို မပြောတတ်ပါ..
နင်နေတိုင်းရှိခိုးနေတာ ၊ စင်ပေါ်ကကုလားစကားနင်နားလည်လို့လား၊နင်တို့ကအရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေ
ဘဲ.သမိုင်းထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်အချင်းချင်းသတ်ပြီး မြစ်ကမ်းနားမှာသေမဲ့အကောင်ဘဲ
ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံဘဲ မောင်းထုတ်ခံနေရတဲ့ ကုလား က ၊”နင်တို့ကအရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေ
ဘဲ.” အဲဒီလို ကွာတာ မင်းတို့သိဘို့ကောင်းပြီ..။
“သမိုင်းထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်အချင်းချင်းသတ်ပြီး မြစ်ကမ်းနားမှာသေမဲ့အကောင်ဘဲ” မင်းပြောသလို မင်းတို့ ပြေးစရာမြေမရှိ နေစရာ နိုင်ငံမရှိနဲ့ မကြာခင် ကြုံရတော့မှာ..။
ဘယ်လို သတ္တဝါ စကားများ ပြောဆိုနေကြပါလိမ့်နော်-
အမိ၊ အဖ မဆုံးမခဲ့ လေလျော့သလား –
နိမ့်ကျလွန်းတဲ့ အပြောအဆို အရေးအသား မသုံးကြပါနဲ့လား-
အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လွန်းပါတယ် –
စိတ်လျှော့ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ —
မယုံသူများ၊မင်္သကာ သူများ သံတွဲလာပြီးလေ့လာပါ။ဘူးပိတ်ငြင်း တတ်တယ်၊ဖင်ပိတ်
ဝပြောမယ် လု တို့ ရွာကို ဘောက်မဲ့ကြောင့် လာရမလဲ
လေယာဉ် လက်မှတ်ဖိုး ခံရင် လာ မယ်
အလကားပဲတင်း ငါ့စကားနွားရတော့ ခေါ်မယ် မကြံပါနဲ့၊
စီကောင်တွေ အားကီး ချုူပ်လယ်၊ ဝတို့လို အေးဆေးစီးပွါးရှာနေပါလား ။
အခုလော့ တိုင်းရင်းသားလွေ ကို ဆော်ခါးလယ် ၊
အားလုံး လွှတ်ခ တွေ့လော့မှာပဲ၊ ဝ အားကီး စိတ်ချုပ်လယ် ၊
အနေမတတ် အစားမတတ်တဲ့ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးတဲ့ မလည်ရှုပ်တွေ ၊
အေးဝေး ငါလိုးမသားတွေရေ မှတ်သာထားလိုက်စမ်း။ငါတို့ က ပြောလိုက်၊ဆိုလိုက်ရင် အဆဲမပါ မပြောချင်ဘူး။
မင်းတို့ မြဲမြဲမှတ်ထား သံတွဲမြို့ ကို ကလီးတွေနေတဲ့မြို့ဘဲ နောက်ထပ် မပြောနဲ့ ။မကြားချင်ဘူး။မင်းတို့ အားလုံး
သေတဲ့ထိ မှတ်ထား ငါတို့ သံတွဲသားတွေကိုယ်တိုင် ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင် ရခိုင်လူမျိုးပါလို့ ဘယ်တော့မှ မပြော
ဘူး။မတတ်နိုင်လို့ အောင့်နေတာ မှတ်ပါ။ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင် ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်၊ဗလီ
ဆောက် အားပေးကူညီနေထိုင်ကြတာကို ကုလားအားပေး၊နေခွင့်ပေးထားသလေး၊မောင်းထုတ်ပြစ်၊သတ်ပြစ်၊
ဖြိုပြစ် ဂုံးချောရန်တိုက်နေတာ ငါတို့ အားလုံးသိတယ်။မင်းတို့ ဗမာတွေ ခုလောက်တုံးကြ၊အကြတာ အံ့သြတယ်ဝေး။
အေးဝေး နားမလည်ရင်ထပ်ပြောမယ်။ငါတို့ သံတွဲမြို့က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စီးပွားရေး၊လူမှူရေး၊ပညာရေး ဘယ်သူ
မှလိုက်မမှီတဲ့မြို့ မို့ခေတ်အဆက်ဆက် မနာလိုဖြစ်၊အောက်ချီး(မျိုးယုတ်/ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှ လူများခေါ်ပုံ)
ဆိုတဲ့ အမည်ကိုတပ် နှိမ့်ချ တယ်၊သူတို့ ဘဲအမျိုးမြတ်သယောင်၊တခြားသူတွေက အမျိုးနိမ့်တွေ သေရင်ငရဲဘဲ
သွားရမလိုလို ပုံ အယူအဆတွေ အယူသီးမှူတွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးမြောက်ပိုင်းက စောက်သုံးမကျတဲ့ အယူမှားဒိဠိတွေ
ကြောင့် သံတွဲသားတွေ ဘယ်ရောက်ရောက် ရခိုင်ပါလို့ မပြောချင်ဘူး။မယုံရင် ကြိုက်တဲ့ သံတွဲသားကိုမေးလိုက်။
ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အရောင်ဆိုးနေတဲ့ မတရားအသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝံသာနုရက္ခိတအဖွဲ့ကို သမ္မတရုံးတိုင်စာပို့ ပြီး
အေးဝေးးးးးငါလိုးမသား ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံစာဝေတဲ့ ငနဲလေးကောင် တော့ အာမခံနဲ့ လွှတ်ထားပြီးပြီ။ဒါက ငါတို့ 
ကိုးကွယ်ရာကို စော်ကားတာဘဲ။ငါတို့ မြို့ခံတွေအားလုံးက သေဒဏ်တော့ပေးပစ်စေချင်တယ်ဝေး။
အယ်.. သံတွဲမြို့က ပညာတတ်တွေပေါတယ် ဆိုတာယုံသွားပြီဗျာ..
တကယ့် အဆဲ ဂုရုကြီးတွေပဲ.. အယောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲ ထူးချွန်ပါ့
အပူးအသတ်တွေ သိပ်တတ်တာပဲနော် .. အဟိ
ဟေ့ နို့နံ့မစင်တဲ့ တောသားတွေ မင်းတို့ တော်တော့ရင်ကောင်းမယ် ၊
တခါလာ သံတွဲ ၊ သံတွဲ နဲ့ ချောက်ညင်ကပ်လာပြီ ၊
မင်းတို့ သီးသန့် ဆိုဒ်ထောင်ပြီး ကလီးဇတ်ခင်းကြ ၊
မင်းတို့ အားလုံးကလီး တွေပဲဖြစ်ရမယ် ၊
ဟေ့လူတွေ ဘာဖစ်နေဂျဒါလဲ လီးဖစ်နေဂျဒါလား
ဒီအကြောင်းက လှုံ့ဆော်မှု့တစ်ခုလို့ ခင်ဗျားတို့ပြောလာနိုင်တာကို
မန်ဘာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်က အသိမှတ်ပြုပါတယ်
ဘယ်သူက ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ပြောကြည့်ကြဇမ်း
ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး says:
အေး သန်းရွှေရုပ်နဲ့ ကောင် မင်းတစ်ယောက်ကိုတော့ လေးစားတယ်ကွာ။
အမှန်ကို မြင်နိုင်သားဘဲကွာ။မယုံပါဘူး သတင်းမှားတယ်အော်နေတဲ့ ခွေး
(၃)သံတွဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့ -၀၄၃၆၅၂၄၁ကိုဆက်မေးလိုက်ပါ။
အာဝါဒါး ဘာညာသာရကာ လာပြောနေနဲ့
If you aren’t happy here then LEAVE.
So accept the country YOU accepted.
ဟို ၃ ယောက်က ဟို ၁ ယောက်ကို ဟိုဥစ္စာပြုတယ် ၊
ဟိုအဖွဲ့က ဟို ၁၀ ယောက်ကို ဟိုဒင်း လုပ်တယ် ။
ဟိုဥစ္စာပြုတဲ့ဟာက စပြီး ဟိုဒင်းတွေ ဟိုသဟာတွေ ဟိုဥစ္စာတွေ ဖြစ်လာတာတဲ့ ။
ကိုပု မသိသေးဘူးထင်လို့ ။
အမေ့သား -ကြောင်ပါး says:
တက်လာလိုက်ရင်သံတွဲသတင်း ကအထူးအဆန်းချည်းပဲ ဒီစာတွေကပွနေတာ တော်တော်ကြာပြီ ဘယ်သူကစဖြန့်တယ်ဆိုတာကိုတော ဘုရားပဲသိလိမ့်မယ် ကဲ…ကောင်းတယ်ထင်ရင်ဆက်သာဒူးကြပေရော့ ဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ဘူး သံတွဲသားတွေလည်း တော်တော်အပြောခံနေရပြီ ရှက်ဖို့တော့အကောင်းသား အဟီးးးးးးးးးးးး
It is not rude place. If you are not our nationality, get out from our country.
သံတွဲ့သားတွေ ဆိုပြီး ၀ါးလုံးချီးသုတ်မရမ်းပါနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ။ကျနော် ကြည့်နေတာ ခင်ဗျားတို့ တော်တော်လွန်နေဘီ ။အပုတ်ချနေတာ ရပ်ပေးပါ။အေးဆေးနေတဲ့မြို့ ကို
ခင်ဗျားတို့ ကြောင့် အသရေပျက်တယ်။
ဒီပို့စ်ရေးတဲ့ ကောင်ဟာ မူဆလင်ကုလား၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုကို ဖန်တီးချင်တဲ့ကောင်လို့ ယူဆတယ်။ သတင်းရေးတာထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိပါးစော်ကားထားတာတွေ့တယ်။ သံတွဲမှာ မစလကုလားတွေ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်လုပ်ထားလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အပုပ်ချလိုပုံရတယ်။ ဒီမှာဟေ့ကောင်.. မင်းမှတ်ထားဖို့က အကြမ်းဖက်သမားဆိုတာ မင်းတို့ မူဆလင်ကုလားတွေပဲ အများဆုံးလုပ်နေကြတာ..ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူ့မေးမေး.. မူဆလင်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ အရင်ပြေးမြင်မိကြတဲ့ လူချည်းပဲ.. ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြ .. အသေခံဗုံးခွဲလိုခွဲ.. ဟိုကိုခြိမ်းခြောက် ဒီကိုခြိမ်းခြောက်နဲ့.. ဘာသာရေးအတွက်နဲ့ဆို ဘယ်သူ့ကိုမဆို သတ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့ အယူဝါဒသမားတွေ… အဲဒါကြောင့် မူဆလင် ရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုရင် မငြိမ်းချမ်းတာများတယ်။.. ပြစရာမရှိတဲ့ ဘုရားကို ကိုးကွယ် မုတ်ဆိတ်တွေထား၊ ၀တ်ရုံကြီးတွေတဖားဖားနဲ့ လမ်းသလား၊ ကုလားလို့ခေါ်ရင်လည်းမကြိုက်၊ .. ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကွာ.. ကုလားဟာ ကုလား၊ အကြမ်းဖက်သမားဟာလည်း ကုလားပဲ။
Guest ဆိုတဲ့နွား သတင်းအမှန်ရေးတာကွ၊ ဘာဘာသာကိုမှမစော်ကားဘူး၊ဖုန်းနံပတ်တွေ
နဲ့ သတင်းမေးနိုင်အောင်တင်ထားတာ၊ လူ(၁၀)ယောင်ကိုရက်ရက်စက်စက်ဝိုင်းရိုက်သတ်တာ
မင်းအမေလင်ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံနွားတွေကွ၊အကြမ်းဖက်တာ မင်းအမေလင် မင်းတို့ကိုးကွယ်
နေတဲ့ ဘာသာ စတဲ့နေရာကကွ၊မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကိုဆိုတာ၊ဒါပေမယ်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ၁/၃ ပုံမှာမွတ်ဆလင်တွေဘဲ၊ငြိမ်းချမ်းသမှသိပ်အေးချမ်းတာ၊မင်းတို့ဘုရားကော
ငါလို့မသား(three colors ,Khin Nwe မာလိန်မှုး)ဒီလောက်တိတိကျကျတင်တာလုပ်ကြံတယ်
ဆိုတော့ ၄င်မေဖင်ချခံရမှသိလိမ့်မယ်၊ အခုသံတွဲမှာလှုံဆော်စာဝေတဲ့နွား(၄)ကောင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီ၊လိုင်စင်မရှိတဲ့ကားပါ
လွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ဒီလေးကောင်ကိုညဖက် ကြီးမိတာတောင် ညမထွက်ရအမိန့်၁၄၄ နဲ့တောင်ရုံးမတင်ဘူး၊ဒီနေရာမှကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေဆို ရင်တော့မလွယ်ဘူး.
တစ်တစ်ခွခွ အားပါးတရ ရှိလိုက်လေ မိတ်ဆွေကြီး Guest ရာ ၊
တိန် တိန် တိန် မြည်အောင်ကို မှန်လိုက်လေ ။
အကြမ်းဖက် သမား တဲ့ ။
သိနေလျက်ကယ်နဲ့ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ အမည်ဆိုးပါ ။
ဒီ post ဟာ မွတ်စလင် တယောက် က တင်သော နာမည်၊နံပါတ် တွေနဲ့ ယုတ္တိတန် အောင် ရေးသား ထားသော လုပ်ကြံ post ဖြစ် ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်၊